Seychelles na -ezuru "ihe nrite marathon nke oke osimiri iri kacha elu n'ụwa"
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Seychelles » Seychelles zuru “World's Top Ten Gorgeous Coastline Marathon” onyinye
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • omenala • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Egwuregwu • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Seychelles zuru “World's Top Ten Gorgeous Coastline Marathon” onyinye
Agwaetiti Seychelles pụtara na GorgeousRun global coastline marathon IP launching na May 23 na Shanghai, napụrụ onyinye maka "World Top Top Gorgeous Coastline Marathon." GorgeousRun bụ ikpo okwu na-ejikọ ndị na-agba ọsọ marathon nke China na ebe ndị ọzọ na-agba ọsọ marathon dị ka Seychelles.
Seychelles Eco-Friendly Marathon bụ ihe omume a na-eme kwa afọ n'ụwa niile site na akara nke Association nke International Marathons na Distance Races (AIMS).
Ndị so na mba ụwa sọọ mpi ebe ha na-ekpori ndụ ebe mara mma nke Seychelles.
Ihe omume mmemme a gosipụtara ebe ndị ọzọ gụnyere Mauritius, Tahiti, Israel na Jamaica.
Paradaịs agwaetiti gbakọrọ aka na GorgeousRun iji gosipụta ịma mma ya na ọkachasị ụzọ marathon Eco-Friendly na ndị na-agba ọsọ marathon nke China.
Seychelles Eco-Friendly Marathon, nke bụ ihe omume a na-eme kwa afọ n'ụwa niile site na akara nke Association nke International Marathons na Distance Races (AIMS), na-enye ndị sonyere n'akụkụ ụwa niile aka ịsọ mpi ma na-enwe ọhụhụ panoramic nke ebe mara mma na njem ha.
N'ebe dị n'akụkụ osimiri na-acha ọcha ọcha na mmiri ozuzo emerald, ndị Seychelles ihe omume na-akwado ndi na-ege ndi mara mba nke ndi marathon-ndi na ndi okacha amara. Na-ejide mbipụta nke iri na abụọ na 12, Seychelles debara aha ndị 2019 mba ofesi si mba iri abụọ na asatọ.
Ugbu a na mmemme GorgeousRun bụ Oriakụ Sun Yingjie, onye nwanyị mba China nke gbara ọsọ ọsọ ogologo oge nke soburu na-agba ọsọ na Seychelles Eco-Friendly marathon site na ikpo okwu GorgeousRun. Nwada Yingjie kesara ahụmịhe ya nke pristine paradaịs na ụzọ njem Marathon nke ndị Seychelles Eco-Enyi na ndị ọzọ, na-akpali ndị ọzọ ịchọpụta mma ebe a na-aga.
Seychelles Tourism Board Director China na Japan, Maazị Jean-Luc Lai-Lam kwuru, "Ọ bụ oge ntụgharị uche maka onye ọ bụla n'ihi ntiwapụ nke COVID-19 na nke a enyela anyị oge iji chee echiche banyere ahụike anyị ugbu a. karịa mgbe ọ bụla. Anyị amalitela ịbawanye usoro mmemme anyị na isonye na egwuregwu ndị ọzọ na-achụso ahụike anyị. Seychelles Eco-friendly Marathon na-emepụta ikpo okwu zuru oke maka ndị ọbịa anyị ka anyị mee nke ahụ mgbe anyị na-ahụ agwaetiti anyị mara mma. N'aka nke GorgeousRun omume na-enye anyị ezigbo ogbo ka anyị iru anyị ezubere iche na-eji ọkụ n'ime marathon ụwa. ”